Madaxweynaha Soomaaliya oo salaada Ciidul Fidriga ku oogay masjidka Isbahaysiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweynaha Soomaaliya oo salaada Ciidul Fidriga ku oogay masjidka Isbahaysiga
Madaxweynaha Soomaaliya oo salaada Ciidul Fidriga ku oogay masjidka Isbahaysiga
July 6, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo salaada Ciidul Fidriga ku oogaya masjidka Isbahaysiga Muqdisho: Sawirka: Radio Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa salaada Ciida dadweynaha kula tugaday masjidka weyn ee Isbahaysiga ee caasimada Soomaaliya, Muqdisho.
Waxaa kaloo Madaxweynaha ku waheliyay madax sare oo katirsan dowlada federaalka Soomaaliya oo uu kamidyahay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cusmaan “Jawaari”.
Salaada kadib Madaxweyne Xasan ayaa khudbad ka jeediyay masaajidka oo uu kaga hadlay xaalada uu dalka marayo gaar ahaan amaanka iyo doorashooyinka soo aadan.
Khudbada Madaxweynaha oo socotay daqiiqado badan oo uu uga hadlay mawduucyo badan ayuu ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay u dhabar adeygaan sidii ay dalkooda u difaacan lahaayeen, dowladda Soomaaliyana ay wax walba u huri doonto sidii dalka xasilooni loogu soo dabaali lahaa, isagoo dadka ugu hambalyeeyay munaasabada Ciida.
Madaxweyne Xasan ayaa sidoo kale cambaareeyay weerarkii lagu qaaday masjidka Nabiga ee magaalada Madiina dalka Sucuudiga.
July 1, 2016 Soomaaliya oo u dabaaldagaysa sanadguurada 56-aad ee madaxbanaanida dalka
Tirada dhimashada qaraxii isbiimaynta ahaa ee ka dhacay Baqdaad oo gaaray 250 qof